कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि – Maitri News
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि
maitrinews March 17, 2020
बेलायत । गत डिसेम्बर महिनामा पहिलो पटक भेटिएको नयाँ कोरोनाभाइरस र यसले लगाउने रोग कोभिड १९ अहिले विश्वव्यापी महामारी बनिसकेको छ।
सैकसैमा यो रोगले सामान्य प्रभाव मात्रै पार्छ भने केहीमा यो रोग मृत्युको कारण बनिदिन्छ।
यो नयाँ भाइरसले कसरी शरीरमा आक्रमण गर्छ ? यसका कारण किन मानिसको जान्छ ? यसको उपचार कसरी भइरहेको छ ?
यदि नजिकै कसैले खोकिरहेको छ भने तपाईँले सास फेर्दा कोरोनाभाइरस शरीरमा पस्न सक्छ। तपाईँको दूषित कुनै वस्तु वा सतह छोएर आफ्नो अनुहार छुँदा पनि त्यसले शरीरमा छिर्न सक्छ।
त्यसले पहिला तपाईंको घाँटीभित्रका कोष, सासनली र फोक्सोलाई असर गर्न थाल्छ। बिस्तारै ती अङ्ग कोरोनाभाइरस उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बन्न पुग्छन् र धेरै भाइरस उत्पादन हुन थाल्छन्। तिनले तपाईँका थप कोषलाई आक्रमण गरेर तिनमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्छन्।
प्रारम्भिक अवस्थामा तपाई बिरामी पर्नुहुन्न। केही मानिसलाई त कहिल्यै कुनै लक्षण नै देखिँदैन।
कोभिड १९ भन्ने रोग १० मध्ये आठ जनाका लागि सामान्य रोग हो। उनीहरूलाई रुघा लाग्ने र ज्वरो आउने गर्छ।
ूभाइरसले यति धेरै जलन गराउन थाल्छ कि तपाईँको धेरै अङ्गहरूले काम गर्न छोडिदिन्छन्,ू डा। भरत पाखानियाले भने।
Previous Previous post: कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीलाई ७५ प्रतिशत जोखिम भत्ता
Next Next post: कोरोनाभाइरस महामारी फैलिने त्रासमा ताजमहल पनि बन्द